Hive platform တာထွက်တော့မည်လော ( Henry Aung ) - HiveLIST
Hive platform တာထွက်တော့မည်လော ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တရိပ်ရိပ်တက်လာခဲ့သော Hive ဈေးကတော့ New Record တခုကို တင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က အမြင့် ဆုံး အနေဖြင့် $1.5 ကျော်ကျော်သာ ရှိရာမှ ယခနေ့ကတော့ $1.93 အထိအမြင့် ဆုံးဆွဲတင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Hive ဈေးတက်လာသည်ဆိုတော့ ပျော်ရပါသည်။
ဈေးတက်လာလျင် စိတ်အားတက်ကြွလာသလောက် ဈေးကျလာလျင် လည်း စိတ်ပျက်မသွားဖို့ အရေးကြီးလှပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Hive အား ၂၀၂၂ တွင်မှ $1 အထက်ရှိလိမ်မည်ဟု ထင်ထားခဲ့ရာ ယခုတော့ နှစ်မကုန် ခင် $2 ဟူသော ဈေးကို ဆွဲကိုင်ထားနိုင်မည်လား စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Hive အကြောင်းကလည်း အရမ်း မရေးရဲပါ။ ကျွန်တော်ရေးလိုက်လျင် ဈေးထိုးကျသွားတတ်၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုတော့ Hive ဈေးတက်တက်ကျကျ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့်တော့ နေစဉ် တင်စရာရှိသည့် post များ တင်နေရုံသာ။ အချို့ကတော့ Hive ဈေးအား $8 လောက်အထိ တက်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင် Hive အား အသည်းအသန် ဝယ်ယူနေသူတို့မှာ ကိုးရီးယား လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးအသိ ဖြစ်သည့် အတိုင်း ကိုးရီးယား များသည် Hive သို့ လိုက်ပါလာခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Steemit တွင် ကိုးရီးယား တို့ မြုပ်နှံမှု ကြီးကြီးမားမား လုပ်ထားကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Hive platform သည် Steemit မှ ခွဲထွက်လာပြီးနောက်Steemit အကောင့် Steem power ရှိသူတိုင်း 1:1 Hive Power ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ဧပြီလမှ ၂၀၂၀ ဩဂုတ်လ အထိ Hive ဈေးမှာ ၁၀ ပြား အဆင့်မှ မတက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်က ကိုးရီယားတို့ ရသည့်ဈေးဖြင့် Hive အား ထိုးချခဲ့ကြသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ကိုးရီးယား တို့ Hive ကို အသည်းအသန် လိုက်ဝယ်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ Hive Platform တွင် Community တခုတည်ထောင်ကာ Project များ လုပ်ဆောင်မည်လား သို့မဟုတ် ဘူဘောင်း ဖေါက်ကြမည်လား မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။
သို့သော် တခုသေချာသည်က Multinational Community သည် Hive Platform သည် အခြားသော Blockchain များထက်သာလွန်နေသည်ကတော့သေချာပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Hive Platform အား လူအများ သတိပြုလာသည်ကတော့ သေချာပါသည်။
ယနေ့ Ecency ကို ဝင်ကြည့်ရာ အပြင်အဆင် အသစ်နှင့် ဖြစ်လိုနေပါသည်။ ယခုတလော Boost မပေးနိုင်ခြင်းမှာ Ecency page အား ပြင်ဆင်နေသော ကြောင့်ဟု ထင်ပါသည်။ ၃ ရက်ဆက်တိုက် Boost လုပ်သော်လည်း မရခဲ့ပါ။
ယနေ့ကတော့ သနားလာ၍ ထင်ပါသည် Ecency လာ၍ ဗုတ်ပေးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Ecency ၏ အပြင်အဆင်ပြောင်းလည်းလာသည်ဆိုခြင်းမှာ Ecency Wallet တွင် ဖြစ်ပါသည်။
ယခင်က Hive Wallet နှင့် Ecency point wallet သာ ရှိရာမှ ယနေ့ကတော့ Hive Engine token Wallet ပါ အသစ်အနေဖြင့် ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် Hive Engine wallet ၏ Estimate Value ကိုတော့ ဖေါ်ပြပေးထားခြင်း မရှိသေးပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ Hive Engine Exchange site ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
25/11/2021 - Thursday - 18;04 Pm
hive-122133 myanmar hive proofofbrain neoxian archon aeneas creativecoin hivelist hivehustlers
Ecency ပြောင်းလဲသွားတာ မသိလိုက်ဘူး။
Hive စျေးသာ 8$ ရောက်လို့ကတော့....
Hive ကို ဥထားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ ။ 😁
များများ ဥ နိုင်ပါစေဗျာ.. !PIZZA. !LOL. !LUV
@kachinhenry you can call @lolzbotamaximum of6per day.
ဟုတ်တယ် Hive စျေးကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ Ecency ကလည်း အပြင်အဆင်အသစ်တွေ နဲ့ ချီတက်လာပြီ....!PIZZA
အားတက်စရာတွေပေါ့။ !PIZZA. !LOL. !LUV
In my past life I wasaturtle.
It is slowly coming back to me.
@uthantzin, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
7 days ago (Edited)
kachinhenry tipped htwegyi (x1)
naythan tipped kachinhenry (x1)
kachinhenry tipped donjaun (x1)
donjaun tipped kachinhenry (x1)
@kachinhenry(9/20) tipped @nyinyiwin (x1)
kachinhenry tipped princekham (x1)
nyinyiwin tipped kachinhenry (x1)
uthantzin tipped kachinhenry (x1)
kachinhenry tipped myanmarkoko (x1)
kachinhenry tipped uthantzin (x1)
kachinhenry tipped nweoomon (x1)
kachinhenry tipped naythan (x1)
htwegyi tipped kachinhenry (x1)
Ecency ကနေ တိုကင်လေးတွေ ကလိမ်းလို့ရတာတော့ သဘောကျတယ်ဗျ။
Did you hear about the restaurant in space?
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @princekham
Token ဘယ်လောက်ဆိုတာပဲ ဖေါ်ပြထားပြီး ဘယ် token တွေဆိုတာ မသိရတော့ တမျိုးကြီးပဲ။ ဒါပေသိ သူတို့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။!PIZZA. !LOL. !LUV
@princekham, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
အရင်ကတော့ အားလက်ချိန်မရှိလို့ပါလေ။ ခုတော့ အချိန်သာအပေါဆုံးဆိုတော့။
အားပေးတယ်ဗျို့... ကိုယ် ဝရိယ စိုက်ထားတဲ့ စာတွေက ပိုက်ဆံ အဖြစ်မြင်လာရပြီ ဆိုတော့....!PIZZA. !LOL. !LUV
@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
စိတ်ဝင်စားစရာပါ ကိုရီးယားတွေ ဝယ်နေတယ်ဆိုတော့
ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ အချိန်ကပြောပြပေးမှာပါ။
I don't think the flounder I caught today was very happy with me.
He kept looking at me kinda sideways.
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
အဲဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ် တွေလည်း ရှိတယ်လို့ ကြားမိတယ်။ !LOL. !LUV. !PIZZA
My roommate keeps saying that our house is haunted.
But I've lived here for last 216 years, and haven't heard anything unusual.
@htwegyi, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
အခုလဲ ကိုးရီယားတွေ လုပ်လို့ ဈေးတတ်လာတာဖြစ်မယ် အကို
Did you hear about the cartoonist being investigated?
Police on the case say he hasasketchy past.
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @naythan
ဟုတ်တယ်ညီ... Bithumb ကနေဆွဲတင်နေကြတာ။. !PIZZA. !LOL. !LUV
@naythan, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
8$ကောင်းဘူး ဒါဇင် ပြည့်အောင် 12$ ထိ ရောက်ပါစေ
ရောက်စေဗျာ... 12$ ..!PIZZA. !LOL. !LUV
What's the difference betweenataxidermist andatax collector?
A taxidermist takes only your skin.
@donjaun, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
@kachinhenry(1/1) gave you LUV. | wallet | market | tools | connect | <><
ဟုတ်တယ်ဗျ ဟိုက်ဗ်က သိသိသာသာကိုတိုးတက်လာတာ ဝမ်းသာစရာပဲဗျို့ ။ !LOLZ
I knowawoman who ownsataser.
အားတက်စရာတွေပေါ့။. !PIZZA. !LUV. !LOL
hive ဈေးကလဲတက်လာ ecency ကလည်း ဒီဇိုင်းပြောင်းလာ အပြောင်းလဲတွေက အားရစရာဗျ။
@kachinhenry, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyinyiwin
Hive တာထွက်ခဲ့ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။. !PIZZA. !LOL. !LUV